Calaamaddii Addoonka Soo Socda - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Qormadeennii u dambeeyay waxaan ku aragnay in nabi Daniel uu saadaaliyay in Masih ‘la goyn doono’. Waxaan u nimid gabagabadii safarkeenna magaalada Sabuur. Laakiin waxaan haysanaa wax yar oo dheeraad ah oo aan wax baranno. Nebi Ishacyaah (fiiri jadwalka hoosta ku yaal) ayaa wax sii sheegay.
Waqtiga Taariikhiga ah ee Nebi Ishacyaah (NNKH) oo ay la jiraan qaar ka mid ah nebiyadii kale ee Sabuur(Axdigii hore)
Waxa ku saabsan Masiixa wuxuu isticmaalayaa matalaad ah laanta.Laakiin Waxaa kale oo uu qoray wax ku saabsan qof imaatinaya oo loogu yeedhay Addoon. Wuxuu qoraal dheer ka qoray Addoonkan soo socda. Yuu ahaa ‘Addoonkan’ ‘? Muxuu sameyn doonaa? Qoraala ayaan ka aragnay faahfaahin. Waxaan si sax ah oo dhameystiran ogu soo saaray sida hoos ku qoran.Waxaad gelisaa qoraal sharaxaayo.
Imaashaha adoonka Waxaa saadaaliyay Nabi Ishaaciya. Addoonkii Imaatinka ahaa wuxuu saadaaliyay nebi Ishacyaah. Qoraalka oo dhammaystiran oo uu qoray Ishaaciya 52: 13-53: 12)
Ishacyaah 52: 13-15
Waxaan ognahay inuu Addoonkan noqon doono nin aadane ah maxaa yeelay Ishacyaah wuxuu ku tilmaamaa ‘isagu’, ‘isaga’, ‘isaga’. Markuu Haun (NNKH) u bixiyo allabari uu u bixiyo reer binu Israa’iil ayuu dadka ku saydhay dhiigga – ka dib dembiyadoodii waa la daboolay oo lama qaban iyaga. Goormaay sheegi in Addoonku ku saydhin mid la micna ah ama si la mid ah inuu adoonkan uu dadkan oo oga seydhi doonaa dambiyadooda siduu Nabi Haaruun ku sameeya Israaiil markuu sameeyay Kafaara gudka
Laakiin Addoonku wuxuu saydhi doonaa ‘quruumo badan’. Sidaadaraadeed adoonka Yahuud oo kelya uma imaanin. Tani waxay ina xusuusineysaa ballanqaadyadii Ibraahim (NNKH) markii ilaah yiri (calaamada 1 iyo calaamadda 3) in ‘quruumaha oo dhan’ lagu barakadeeyn doono farcankiisa. Laakiin sameynta seydhid ‘muuqaalka’ iyo ‘qaabka’ addoonka waxaa ‘laga arki doonaa’ oo ‘la marin doonaa’. In kasta oo aysan caddayn waxa Addoonku ku samayn doono sida cilladdan oo kale, ayaa maalin maalmaha ka mid ah quruumuhu ay ‘fahmi doonaan’Sababo jira aawadeed, ayuu Addoonku saydhin doono quruumo badan, haddana waa la ‘quudhsan doonaa’ oo ‘la diidi doonaa, oo la silcin doonaoo xanuun ayuu barani doonaa.
4 Sida runta ah wuxuu xambaartay xanuunyadeennii, wuxuuna qaatay murugadeennii, laakiinse waxaynu ku tirinnay mid belaayo ku dhacday, oo Ilaah dilay, oo dhibaataysan. 5 Laakiinse waxaa isaga loo dhaawacay xadgudubyadeenna, waxaana loo nabareeyey xumaatooyinkeenna, edbintii nabaadiinadeennana dushiisay ku dhacday, dildillaaciisiina waynu ku bogsannay.
Addoonku wuxuu qaadan doonaa ‘xanuunkeena’. Addoonkan ayaa sidoo kale ‘lagu mudhi doonaa’ oo ‘lagu burburin doonaa’ ciqaabta ‘. Ciqaabtan ayaa quruumo badan u keeni doontaa nabad oo ku bogsooni doonaa.
. 6 Dhammaanteen sidii ido baynu u hallownay, midkeen waluba jidkiisuu u leexday, oo Rabbigu wuxuu isaga dul saaray xumaanteenna oo dhan.
Waxaan ku aragnay astaamaha burburka, sida ugu fudud ee aan ugu tagno ‘ceelalkeena burburay’ si aan u qancinno harraadkeena halkii aan u jeesan lahayn xagga Ilaah. Waxaan ku dhuntay ‘midkeen kasta’ oo jidkiisa ka leexdo. Tani waa dembiga (= xumaanta ama sinnaan laaan).
Ishacyaah 53: 7
Nabiyadii Aabiil, Nuux, Ibraahim, Muuse iyo Haaruun (NNKH) waxay keeni jireen wanan in allabari lagu bixiyo. Laakiinse Addoonku naftiisa ayaa noqon doonaan sida wanka la doonayo in la gowraco. Laakiin isagu kama hor imaan doono ama xitaa ‘afkiisa ma furi doono’.
Addoonkan ‘waa laga gooyay’ dhulka kuwa nool ‘. Tani ma wuxuu ula jeedaa nebi Daanyeel markuu yidhi in Masiixa la ‘gooyn doono‘? Erayada isku midka ah ayaa la adeegsadaa! Waa maxay macnaha ‘in laga gooyo dhulka kuwa nool’ midka dhimanayo mooyee?
Haddii loo xilsaaray ‘qabri’ Addoonkan waa inuu dhintaa. Isaga waxaa loo xukumay inuu yahay nin shar leh ‘inkasta oo uusan’ wax dulmi ah ‘ uusan’ afkiisu khiyaanayn jirin.
Geeridaas naxariis darradu geysatay ma ahayn shil aad u xun ama masiibo. Waxay ahayd mid si cad ‘rabitaankii Rabbiga’ u ‘burburin doona’. Laakiin waa maxay sababta? Sida allabari Harun uu ‘allabari u bixisay’ dembiga aawadiis qofka bixinaya allabaryada waxaa loo haysan karaa mid aan eed lahayn, halkan ‘nolosha’ Addoonkan ayaa sidoo kale ah ‘qurbaan dembi’. Waa Dembigee? Markaan tixgalineyno in ‘quruumo badan’ ‘la’ firdhin doono ‘(xaga kore) waa inay ahaato dembiga dadyowga’ quruumo badan ‘.
In kasta oo wax sii sheegidda Addoonku ay halkan ku naxdin badan tahay haddana waxay isu beddeshaa mid cod leh waxayna noqotaa rajo wanaagsan oo xitaa guul. Kadib ‘dhibaatadan’ xun ee (ka go’ida dalka kuwa nool ‘oo loo xilsaaray’ qabri ‘), Addoonkan ayaa arki doona’ iftiinka nolosha ‘. Isagu wuu soo noqon doonaa? Marka sidaas la yeelo Addoonkan ayaa ‘iska caddeyn doona’ kuwo badan.
‘Caddeynta’ waa isku mid in la bixiyo ‘xaqnimo’. Xusuusnow inaad hesho ‘Xaqnimada’ xagga Sharciga Muuse oo ah in la dhawrto dhammaan amarrada waqtiga oo dhan. Laakiin nebi Ibraahiim (calaamadii 2) ayaa ‘lagu qiray’ ama lagu siiyay ‘xaqnimo’. Waxaa isaga loo siiyay si fudud aaminnimadiisa darteed. Si la mid ah Addoonkan ayaa xaq u noqon doona, ama ugu abaalgudi doona kuwa ‘badan’. Xaqnimadu miyaanay ahayn wax aan labadeenuba dooneynno oo aan u baahan nahay?
12 Waayo, degdeg kuma bixi doontaan oo qixidna kuma carari doontaan, maxaa yeelay, Rabbiga ayaa idin hor kici doona, oo Ilaaha reer binu Israa’iil ayaa idin daba socon doona.
Addoonkan ayaa ka mid noqon doona ‘kan weyn’ maxaa yeelay isagu wuxuu is xilqaamay (‘daadiyay’) noloshiisa ‘ilaa dhimasho’ Oo isagu wuxuu u dhintay sidii mid lagu tiriyey inuu xadgudbay, kaasuna waa sidii dembilaha. Maxaayeelay Addoonku wuxuu u sameeyay tan isagoo sameyn karaa ‘shafeeco’ isagoo matalaya ‘xadgudbayaasha’. Shafeecee waa dhexdhexaadin ka dhaxaysa labada dhinac, Labada dhinac halkan waa inay ahaadaan ‘dad badan’ iyo ‘Rabbiga’. Addoonkan ‘wuxuu ku filan inuu ku shafeeco ama ku baryo magacayada Ilaaha laftiisa!
Waa ayo Addoonkan? Sidee waxyaalahan oo dhami u dhici karaan? Miyuu ‘iskuna baryi doonaa’ magaca ‘kuwa badan’ oo ka kala yimid ‘quruumo’ kala duwan xagga Eebe laftiisa? Waxaan ku soo gabagabeyney Sabuurka markii aan fiirineyno sheegiddii ugu dambeysay ka dibna waxaan fureynaa Injil.
Tags:Addoonkii nebi IshacyaahMiyuu Masiixu dhiman doonaa? Masih miyuu dhiman doonaa?Nebi Ishacyaahoo ahaa addoonkii zabureQeyb la'aan Tagsigii Masih oo ahaa addoonkii IshacyaahWaxsii sheegyada Zabur